Biden: Ciidamada Maraykanka kama soo bixi doonaan Afghanistan 1-da May! - Horseed Media
Biden: Ciidamada Maraykanka kama soo bixi doonaan Afghanistan 1-da May!
Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa xalay soo jeediyey khudbad dheer oo uga hadlay qorshaha dowladiisa iyo siyaasada Arrimaha Dibada.
Joe Biden ayaa khudbadiisa uga hadlay qaabka xukuumadiisa u wajihi doonto xiisadaha kala duwan ee caalamka ka jira isagoo ka jawaabay su’aalaha saxaafadda.
Ciidamada Maraykanka ka jooga dalka Afghanistan oo ay xukuumadii hore ee Trump saxiixday inay wadankaasi kasoo bixi doonaan 1da bisha May, ayuu Biden sheegay inaysan macquul ahayn in wakhtigaasi dowladii hore qabsatay ayna adag tahay in ciidamadooda wakhtigaas looga soo saaro wadankaasi.
Balse Biden ayaa sheegay in qorshihiisa aysan ahayn in wakhti aad u dheer ay sii joogaan dalka Afghanistan, uuna rajeenayo in arrintaasi la dhameystiro sanadkan illaa bilowga sanadka soo socda.
Heshiiskii Doha ku dhexmaray xukuumadii hore ee Trump iyo Talibanka ayey horey kooxdaasi Talibanka uga digtay inuu ka baxo Madaxweynaha cusub ee Maraykanka. Talibanka ayaa todobaadyadii lasoo dhaafay dardar geliyey weeraradooda.
Biden ayaa digniin u diray hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo Khamiistii tijaabiyey Gantaalo cusub.
Madaxweynaha Maraykanka ayaa falkan ku sheegay mid keeni kara khatar horleh isla markaana dhanka Maraykanka ay diyaar u yihiin inay ka jawaabaan. Hase yeeshee wuxuu sheegay in dhankooda diyaar u yihiin wadahadal, balse sharuuda laga rabo Kuuriyada Waqooyi waa “…inay ogolaadaan inay burburiyaan hubkooda Nukliyeerka…”
Madaxweynaha Maraykanka ayaa sheegay inuu doonayo in dib loo xoojiyo xiriirkii dalalka reer Galbeedka iyo xulafadii uu horey xiriirka ugu jaray Trump, si markaasi Maraykanka uga hortago khatarta uga imaan karta China.
Biden ayaa sheegay in ay xooga saari doonaan maalgelinta wax-soo-saarka shirkadaha Maraykanka si caalamka uusan ugu tiirsanaan oo kaliya awooda wax-soo-saar ee dalka China.
Dhinaca kale ololaha Talaalka Covid19 ayuu sheegay Biden inuu ku guuleystay balanqaadkiisii ahaa in 100ka maalmood ee xilkiisa ugu horeeya uu talaali doono 100 milyan oo qof, taasi oo la gaaray asbuucii hore, wuxuuna hada sheegay in qorshahooda cusub yahay in 200 milyan qof oo Maraykan ah la talaalo kahor inta aysan dhamaan 100ka maalmood ee ugu horeysa intuu xafiiska joogay.